Haweenka caanaha iibiya oo helay keydiye casri ah
Email ku dir
Photo | Sawir/kaydka/Ergo
13 July, 2015 SHABELLADA HOOSE
Hey’adda Aqoonyahanada Beeraha Soomaaliyeed ayaa keydiyayaal casri ah u qeybisay qaar ka mid ah dumarka caanaha ku iibiya wadooyinka magaalada Muqdisho. Keydiyayaashan casriga ah ayaa ka caawinaya 24 dumar ah, oo ay hey’addu u tababartay nidaam kordhinaya dakhliga haweenka kasoo gala caanaha, in aysan caanahu isbadelin labo maalin. Horey dumarku waxa ay dhib ugu qabeen keydinta caanaha oo saacado gudahood isku badela, sida ay sheegtay Shukri Maxamed Jimcaale oo ka ganacsata caanaha muddo shan iyo toban sano ka badan.
“Haddii caanahu nagu daahaan way isbadeli jireen. Markaa waxaa is dhimijiray qiimahooda iyo tayadooda oo nalaga ma iibsan jirin,” ayey tiri Shukri oo ka mid ah hablaha helay, kana faa’iiday qalabka caano keydiyaha ah iyo tababarka Hey’adda Aqoonyahanada Beeraha Soomaaliyeed. Shukri waxa ay intaa ku dartay in hadda caanaha oo aan isbadelin ay maalmo u joogaan iyada oo aan qiimahoodu iyo tayadoodu isdhimin.
Xoolaha iyo waxa kasoo baxa waxa ay ka mid yihiin tiirarka waa weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya. Dadka xoolo-dhaqatada ah ayaa hilibka iyo caanaha oo noloshoodu ku tiirsan tahay u iibgeeya magaalooyinka ku dhow. Laakiin badi dadka xoolo-dhaqatada ah iyo kuwo caanaha ka ganacsada aqoon uma lahan habka loo keydiyo, loona nadiifiyo wiilasha caanaha lagu keydiyo.
Dhakhtar Axmed Taakoow Xasan oo xubin ka ah Aqoonyahanada Beeraha Soomaaliyeed wuxuu sheegay qalabka haweenka loo qeybiyay ee keydka caanaha uusan aheyn wax dibada laga keenay, se laga helay gudaha dalka. “Qofka tababaraha ah ee aqoonta u leh habka loo isticmaalo, loona nadiifiyo qalabka uun baa dibada ka yimid,” ayuu yiri Dhakhtar Taakoow oo la hadlay Raadiyoow Ergo.
Tababarka iyo qalabka la socda waxa ay badaleen nolosha qoysaska dumarkii ka faa’iiday oo ay ka mid tahay Nadiifo Cali Rooble. Maadaama Caanahu mudo joogi karaan iyaga oo aan isrogin, weel ku haboona lagu keydiyay, dumarka hadda kama welwelaan in caanahu ka halaabaan, sida ay sheegtay Nadiifo. “”Halkii aan awal 200,000 oo shilin ka heli jiray, hadda 300,000 baan helaa. Marka, faa’iido weyn ayaa noogu jirta.”
Warbixinno la xiriira
Dhoofka xoolaha ee xajka oo fursad u noqday xoolo-dhaqatada Koonfur-galbeed ee abaarta ku raagay
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA
Qiimaha oo sare u kacay xilliga xajka oo caawisay nolosha xoolo dhaqatada
Barakacayaasha iyo Qaxootiga (751)
Arrimaha Bulshada (649)
Caafimaadka & Waxbarashada (579)
Beeraha iyo Xoolaha (416)
Raadiyo Ergo waa isha keliya ee wararka arrimaha bani’aadannimo ee khuseeya Soomaalida. Waxaa maalin kasta 03:00 – 04:00pm laga dhegeystaa mowjadda gaaban ee 16ka Meter Band (17845 MHz) iyo 15 idaacad oo ku yaalla Soomaaliya. Wuxuu baahiyaa warbixinno iyo falanqeyn muhiim u ah badbaadada nolosha dadweynaha Soomaaliyeed. Wuxuu barnaamijyo ka sameeyaa arrimaha caafimaadka, beeraha, dhaqashada xoolaha, tahriibka, waxbarashada, ka hortagga isku-dhacyada, sinnaanta iyo caddaaladda, helista nolol-maalmeedka, fursadaha shaqooyinka iyo dhowrista deegaanka. Baahinta xogtaas waxay ku caawisaa dhegeysteyaasha Soomaaliyeed inay go’aan xog-ogaalnimo leh ka qaataan waxyaabaha khuseeya noloshooda, tan qoysaskooda iyo tan bulshadooda.
Raadiyo Ergo oo horay u ahaa laanta af-Soomaaliga ee Wakaaladda Wararka Arrimaha Bani’aadannimada ee Qaramada Midoobay (IRIN) wuxuu tan iyo sanadkii 2008 hormuud u yahay warar ka tebinta arrimaha bani’aadannimo, xasaradaha, musiibooyinka iyo horumarka Soomaaliya. Wuxuu sidoo kale shaqo-wadaag la yahay idaacado FM ah oo Soomaaliya ku yaalla oo uu ka caawiyo u tababarista iyo ka talo siinta inay barnaamijyo ka sameeyaan arrimaha bani’aadannimada iyo dhacdooyinka taabanaya nolosha dadweynaha.
Tweets by @RadioErgo